Evha wegore Idzva Anofara ... Zvimwe | Martech Zone
Manheru Edzva Rakanaka… Pamwe
Svondo, Zvita 31, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Masikati ano ndiri kutarisira kushandisa Evha Idzva Idzva neshamwari dzakanaka, Bill naCarla. Tichatamba dzimwe Cranium mitambo, tarisa mamwe mavhidhiyo, uye uzorodze apo isu takamirira 2007 kuti iuye chinyararire uye (netariro) nerunyararo.
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Ini ndanga ndanyora kare nezve inonetsa bhizinesi hukama hwandakapinda neimwe blogger. Pakukumbira kwevamwe vaverengi, ini ndinochengeta iyi chikamu posvo. Nekutenda, tiri kushanda kuburikidza nenyaya dziripo.
Douglas Karr Sunday, December 31, 2006 Tuesday, October 4, 2011
Matambudziko ehunyanzvi, Ndokumbirawo Umirepo
Yekutanga Guides kune SQL Jekiseni uye Muchinjikwa-Saiti Kukanda
Ndira 2, 2007 na9: 03 PM
Jan 4, 2007 pa 7: 51 AM
Ndiri kufara kuti izvi zviri kuitwa kuburikidza. Ndakaona iyo yekutanga posvo, uye ndainetseka kwazvo nezvako. Sezvo ini munguva pfupi yapfuura ndakachema kufa kwemurume / mukadzi wangu (isu takanga takaparadzaniswa asi shamwari dzepedyo) NDINOGONA kutaura nezve Holiday Blues.
Yangu ine chinyorwa chinofadza, futi. Aida Kisimusi, asi hutano hwake hwakamutadzisa "kuzviita nemazvo" mumakore mashoma apfuura. Ini ndinonyaradzwa nekuziva kuti aive neKisimusi yakanaka kwazvo.